Taunggyi Time (တောင်ကြီးတိုင်းမ်): 2010
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
တောင်ပေါ် တောမြို့နှင့် အလှမ်းသိပ်မဝေးလှသည့် တောရွာတစ်ရွာတွင် အတော်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် လူပျိုတစ်ယောက်ရှိ၏။ တစ်ညနေ၌ ယင်းလူပျိုသည် သူတစ်ခါမှ မမြင်မက်ဖူးသည့် အလွန်ထူးဆန်းသည့် အိမ်မက်တစ်ခုကို မက်ခဲ့သည်။
Tuesday, 28 December 2010 | သျှမ်းသံတော်ဆင့်
Pa-O leader: The Lady’s Panglong II call deserves open minds
Tuesday, 28 December 2010 | S.H.A.N.
Hkun Okker, President of the Pa-O National Liberation Organization (PNLO) and board member of the exiled Burma Lawyers Council (BLC), speaking to Shan State leaders yesterday, urged them to keep an open mind to the call for the 21st century Panglong Conference, also known as Panglong II, by Nobel laureate Aung San Suu Kyi.
ဒီဗွီဘီ ၊ ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၊ ၂၀၁၀
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်လောင်းမြို့နယ်မှာ အအေးဓာတ်လွန်ကဲပြီး အနုတ် ၃ ဒဿမ ၂ ဒီမိုဂရီ စင်တီဂရိတ်အထိ ကျသွားတဲ့အတွက် ဒါဟာ ၄၄ နှစ်အတွင်း အအေးဆုံးစံချိန်တင်သွားတယ်လို့ မြန်မာအလင်းသတင်းစာက ဖေါ်ပြပါတယ်။
By ဦးဇော်ဝင်းလှိုင် | တနင်္လာ | 13 ဒီဇင်ဘာ 2010 | ဗွီအိုအေ
ပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု တိုးလာပြီး ပြည်တွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှုနှုန်း ဟာလည်း မြင့်တက်လာတာကို တွေ့ရတယ်လို့ နှစ်စဉ်ထုတ်ဝေတဲ့ UNODC ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ရာဇ၀တ်မှု နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာ အသစ်က ပြောပါတယ်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(PNLO)၏ (၆၁) နှစ်မြောက် ပဒေသရာဇ်စနစ် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
BY AUNG DIN | DECEMBER 10, 2010
NLD မှ “အန်ကယ်ကြီး” များကို အမေရိကန်အစိုးရ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်
နရီလင်းလက် | Friday, 10 December 2010 | ဧရာဝတီ
အမေရိကန် သံတမန်တဦး၏ လျှို့ဝှက် အစီအရင်ခံစာတစောင်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှ “အန်ကယ်ကြီး” များ၏ ခေါင်းဆောင်မှုအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ထားကြောင်း ဝီကီလိစ်က ဖွင့်ချလိုက်သည်။
Guardian.co.uk, Thursday9December 2010
ဒု-ပင်လုံညီလာခံ စင်ပြိုင် အာဏာ ယူဖို့မဟုတ်၊ စည်းလုံးရေးသာ ဦးတည်ဟု ဒေါ်စုဆို
By ဦးဇော်ဝင်းလှိုင် | ကြာသပတေး | 09 ဒီဇင်ဘာ 2010 | ဗွီအိုအေ
ဒုတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်း ကွယ်ပျောက်လာနေတဲ့ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကို ပြန်လည်စုစည်း ထူထောင်ဖို့အတွက်သာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ မကြာခင် ပေါ်ပေါက်လာမယ့် လွှတ်တော်အသစ် စတာတွေကို စင်ပြိုင်လုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ မနေ့က ဒီမိုကရေစီနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ NLD ရုံးချုပ်မှာ တွေ့ဆုံစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဲဒီလို ပြောကြားလိုက်တာပါ။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ် စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒုတိယပင်လုံ ဆက်လုပ်မည်ဟု တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ တုံ့ပြန်
ခင်ဦးသာ | Thursday | 09 December 2010 | ဧရာဝတီ
ဒုတိယပင်လုံသည် စစ်အစိုးရ သတင်းစာများက ရေးသားထား သကဲ့သို့ စိတ်ကူးယဉ် ညီလာခံတခု မဟုတ်၍ ဖြစ်မြောက်သည် အထိ လုပ်ဆောင် သွားမည်ဟု တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက တုံ့ပြန်ပြောဆိုသည်။
“Do or Die,” Daw Aung San Suu Kyi: Policy paper on Burmese Ethnic Perspective
By Kanbawza Win |5December 2010
Most Burmese nationalists would recollect the famous Bogyoke Aung San speech during his visit to London, in Jan27th 1947 for the inking of the historic Aung San-Attlee Agreement (Aung San as Deputy chairman of the post war British Burma and Clement Attlee the Prime Minister of Britain) when he said, “I hope for the best but prepared for the worst.” that paves the way for Burma’s independence. So also his loving daughter Daw Aung San Suu Kyi will be in the same position of hoping for the best but preparing for the worst as her choice will be “either do or die” visavis with the Tatmadaw thugs.
ကရင်တပ်ဖွဲ့နှင့် ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲတွင် နအဖ ၃၀ ဦးကျဆုံး
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲးတွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်မှ အနိုင်ရ လွတ်တော်အမတ်များ
U Nay Win Tun No.9 PNO အမျိုးသားလွတ်တော်
U Khun Maung Thaung Pinlaung PNO ပြည်သူ့လွတ်တော်
U Win Ko Hsihseng PNO ပြည်သူ့လွတ်တော်
U Khun Thein Pe Hopong PNO ပြည်သူ့လွတ်တော်
U Khun Aye Maung Hopong (1) PNO ပြည်နယ်လွတ်တော်
U Khun Hla Thein Hsihseng (1) PNO ပြည်နယ်လွတ်တော်
U Khun Maung Wei Hsihseng (2) PNO ပြည်နယ်လွတ်တော်
U Khun Hla Hsan Pinlaung (1) PNO ပြည်နယ်လွတ်တော်
၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ ၊ တနင်္လာနေ့
လွန်စွာခင်မင်ရင်နှီးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးယောက်က အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ပုံပြင်ကို တလှည့်စီ ပြောဖြစ်ကြသည်။
The Struggle of the Pa-Oh People
ရထားလမ်း ဖောက်မှုကြောင့် မြောက်ဦး ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ပျက်စီး
By ဦးမိုးဇော် | ဗုဒ္ဓဟူး | 17 နိုဝင်ဘာ 2010 | VOA
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ လက်ရှိ ဖောက်လုပ်နေတဲ့ စစ်တွေ၊ အမ်း၊ မင်းဘူး ရထားလမ်း စီမံကိန်းကြောင့် မြောက်ဦးမြို့က ရှေးဟောင်း ဘုရားစေတီ ပုထိုးတွေနဲ့ သမိုင်းဝင် ကျုံး၊ မြို့ရိုး၊ တံတိုင်း စတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေ ဖြိုချ ဖျက်ဆီးခံနေရပါတယ်။ ဒေသခံတွေနဲ့ ရဟန်းတော်တွေက မေတ္တာရပ်ခံ တားဆီးနေပေမဲ့ အခုချိန်ထိတော့ ရပ်တန့်သွားတာ မရှိသေးပါဘူး။ ဒီလို ဖြိုချ ဖျက်ဆီးနေတာဟာ UNESCO ခေါ် ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ရဲ့ မူနဲ့ ဆန့်ကျင်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်း သုတေသန အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တာ ဖြစ်သလို ရခိုင်အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုကို ဖျက်ဆီး ဖျောက်ဖျက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်တာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြထားပါတယ်။
The Burmese junta has warned that anyone who filesacomplaint against the7November elections risksathree-year prison sentence.
နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် ၊ ၂၀၁၀ ။ ကေအိုင်စီ
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြ၀တီမြို့တွင် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် (ဒီကေဘီအေ)နှင့် နအဖ စစ်တပ်တို့ ကြား ယနေ့မနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၉နာရီမှစ၍ ယခုနေ့ခင်းပိုင်းအချိန်ထိ မြ၀တီမြို့တွင်း၌ ဒီကေဘီအေနှင့် နအဖ စစ်တပ်များ ပစ် ခတ်မှု သုံးနေရာ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မြ၀တီမြို့တွင်းမှ လူထု ၃ဦး သေဆုံးပြီး ၂၀ဦး ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟု သိရသည်။
By SAW YAN NAING and LAWI WENG | Saturday, November 6, 2010
Five ethnic armed groups have this week set up what they have named asa“federal army” with the aim of defeating the Burmese army and toppling the military regime,arepresentative of the alliance told The Irrawaddy on Saturday.
ဧရာဝတီ Friday, 05 November 2010 18:54
ရွေးကောက်ပွဲ အလွန်တွင် စစ်အစိုးရက တိုက်ခိုက်လာ နိုင်သည်ဟု ယူဆပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ပူးပေါင်း ၍ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး မဟာမိတ် ကော်မတီတရပ်ကို ယမန်နေ့က ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်။
ဆီဆိုင်မြို့နယ် တောင်ရှေ့အုပ်စု သေင်းဖြီနာ(စိန်းဖရီးနာ)ရွာနေ ဦးထွက်သောမိန္ဒ (ခ) မောင်ကျာနှင့် ၄ နှစ်အရွယ် သမီးနန်းဖြူ ကို ဆီဆိုင်မြို့အခြေစိုက် ခလရ ၄၂၃ တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်မှူးဇော်လင်းထွန်း ဦးစီးသော အင်အား ၂၀ ကျော်ရှိစစ်ကြောင်းမှ၂၀ -၉- ၂၀၁၀ ရက်နေ့တွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်လိုက်သည်။
Thursday, 04 November 2010 ၊ နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း
Thursday, 28 October 2010 16:06 Hseng Khio Fah
Local people in Shan State South’s Pa-O self-administered zone are reportedly being forced to cast vote for Pa-O National Organization (PNO) by the party candidates, local sources reported.
စိုင်းဇွမ်ဆိုင်း | Wednesday | October 27, 2010 | ဧရာဝတီ
By Kanbawza Win | October 26, 2010 | Tuesday
The Burmese Junta used to boast and justify that half of the world’s population recognize and eulogize its regime and all its actions are right and correct, even though the Western countries consider the Burmese regime as the most egregious human rights violator of the world. Perhaps this hypothesis may have some salt in it because the population of China, India and ASEAN countries is more than half of the world’s population. All these countries have supported the Burmese Junta in the international forums especially in the UNSC and it stands tall.
By Colum Lynch | Sunday | October 24, 2010
Just days after the Obama administration decided in August to support the prosecution of Burma's top military rulers for war crimes, China's U.N. ambassador, Li Baodong, paidaconfidential visit to U.N. Secretary-General Ban Ki-moon's chief of staff to make his opposition clear: The U.S. proposal, he said, was dangerous and counterproductive, and should not be allowed to proceed, three U.N.-based sources familiar with the exchange told Turtle Bay.
မိုးယံ | Monday, October 25, 2010 | ဧရာဝတီ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဂီရိ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရသော ဒုက္ခသည်များအတွက် ကူညီလှူဒါန်းရန် ကြော်ငြာများကို အစိုးရ မီဒီယာများ၌ ထည့်သွင်းဖော်ပြခွင့်မပြုကြောင်းနှင့် လူအသေအပျောက် ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်သော သတင်း အချက် အလက်များကိုလည်း ယနေ့အထိ ဖော်ပြခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ပအိုဝ်းပါတီက စတိတ်ရှိုးဖြင့် နယ်လှည့် ဖျော်ဖြေ၍ မဲဆွယ်စည်းရုံး
သတင်းနှင့်မီဒီယာ ကွန်ယက်။ ခွန်အောင်မြတ်။ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် (ပီအဲန်အို) ပါတီသည် ဒေသခံလူထုများအား နာမည် ကြီး အဆိုတော်အဖွဲ့များဖြင့် နယ်လှည့်၍ ပါတီမဲဆွယ် သီချင်းများဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေကြသည်။
A Burmese Perspective: The Chung Kuo (Zhōngguó) 中国 Spirit
(The World Will Have to Unite Against Communist Dictatorship)
By Kanbawza Win | 22 October 2010 | Friday
Chung Kuo means the "Middle Kingdom," or “central country" and that China is the centre of their known civilized world and the peripherals were called Eastern Yi, Southern Man, Western Rong and Northern Di, respectively considered to be less civilized, if not barbarian. Like it or not, the only civilized people are the Chinese residing at the centre of the universe while the rest are barbarians is the basic philosophy of the Chinese which is engrained in them, especially for the men on the dragon throne. Hence Democracy, Human Rights and Freedom enshrined in the universal values are alien to them. The term of universal values that the government serves the people and that the natural resources belong to the public and public utility is for the sake of the people’s happiness is quite unknown and strange to Communist Chinese and the current Burmese leaders.
အပစ်ရပ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝ လက်မခံဟု ကြေညာ
အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆယ်ရက်ကျော်သာ လိုတော့သည့်အချိန်ကာလတွင် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ယူထားသော မွန်ပြည်သစ်ပါ တီ(NMSP)က နအဖ စစ်အစိုးရ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် တရားမျှမှု မရှိသည့်အတွက် လုံးဝ လက်မခံနိုင် ကြောင်း အောက်တိုဘာလ ၁၈ရက်နေ့တွင် သဘောထားကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နီပအိုဝ်;အနာ;ဂါတ် တွမ်; နီပအိုဝ်;လို,ပေ;ဟန်;နီ, (Today Pa-Oh Children Are The Leader Of Pa-Oh Tomorrow)
As China is turning the pacific ocean into the Chinese lake, Beijing is lashing out at the West over human rights, the environment, and the valuation of its currency, leading many to argue that China's rise is finally beginning to have the destabilizing impact so long predicted by some leading international relations scholars and pundits. But many observers are missing another important driver of Beijing's recent assertiveness: China's foreign policy is not in the hands of its diplomats.
ပအိုဝ်းမဂ္ဂဇင်း (အမှတ် - ၁၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀) Pa-Oh Magazine, Issue 16, Oct 2010
Pa-Oh Magazine - Issue 16 (October 2010)
ပအိုဝ်းမဂ္ဂဇင်း - ဇူလိုင် ၂၀၁၀ (Pa-Oh Magazine - July 2010)
Pa-Oh Magazine (July 2010)
BY DARON ACEMOGLU , JAMES A. ROBINS | SEPTEMBER 30, 2010
With Burma's government holdingarare election in November, it's fair to wonder whether the military junta has real changes in store for the beleaguered country. Last Friday,aBurmese official at the United Nations even went so far as to insist that the leader of the Burmese opposition, Aung San Suu Kyi, will haveachance to castaballot. Unfortunately, the full evidence suggests that the regime isn't inclined to initiate any deep reforms after 48 years of autocratic rule: Although Suu Kyi will be able to vote, she was barred from running for office, and her imposed house arrest has yet to be lifted.
By Kanbawza Win | October 01, 2010 | Friday
Dictators of the world, almost without exception, are always attempting to smother “Truth & News”. They are especially afraid of the internet news which in split second reaches its thousands of destinations. The raison d’être of the dictators to smother or block off the truth and news is that it tarnishes their image gravely. The Burmese Junta is no exception and it has becomeabig joke when it accuses the well established radio stations such as the BBC, VOA and RFA and the TV stations like the CNN and Aljazeera as liars. It is the case of the thief shouting “thief!” to divert the attention of the media and the public away from itself.
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း အချို့မြို့များ၌ ကြံ့ဖွတ်အနိုင်ရရေး PNO ကူညီ
ရှမ်းသံတော်ဆင့် | သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၀ | အင်္ဂါနေ့
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း အချို့မြို့များ၌ ဦးအောင်ခမ်းထီ ဦးဆောင်သည့် PNO ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်က ကြံ့ဖွတ်ပါတီ အနိုင်ရရေးအတွက် ကူညီမဲဆွယ် စည်းရုံးနေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
“တောင်ကြီးမှာဆို ထောက်ခံမဲထည့်ပေးဖို့တင်မကဘူး၊ PNO အဖွဲ့ဝင်တွေက ကြံ့ဖွတ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ်တောင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်”- ဟု ပအိုဝ်းလူငယ်တဦးကပြောပါသည်။
တခါက ကျေးလက်ဒေသရှိ တောရွာတစ်ရွာ၌ နေထိုင်သည့် လယ်သမားလင်မယားနှစ်ယောက်က အလွန်အမေ့ကြီးသည့် သားလေးတစ်ယောက်ရှိ၏။
ပြုစုရေးသားသူ။ ။ ခွန်းဇံ (ခ) ခွန်မေးလို့ | တောင်ကြီး
ပြင်ပသရုပ်ပျက်ယဉ်ကျေးမှုများကို တားဆီးနိုင်ရန် မိမိတို့ပအိုဝ်း အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုများကို ဖေါ်ထုတ်ရမည်။ မိမိတို့ယဉ်ကျေးမှုများကို မိမိပြည်သူများ သဘောပေါက် နားလည်စေရန် လုပ်ဆောင်ရမည်။ မိမိယဉ်ကျေးမှု အနုပညာများကို ထိမ်းသိမ်းးရာတွင် တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်ကောင်း ထိန်းသိမ်း၍ မရနိုင်သဖြင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ထိန်းသိမ်းသွားမှသာ အောင်မြင်နိုင်ပါမည်။
ဗိုလ်မှူးရွှေမန်းနှင့် ဗိုလ်မှူးကီး သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Sunday | 15 August 2010
By: J. Sri Raman, t r u t h o u t | Op-Ed
I see I hear I know
I beat I hit I touch
I kill I kill the monks are dead.
That was the chant of Than Shwe, Burma's military dictator, as he meditated recently at Bodhgaya, the place in India where Gautam Buddha attained enlightenment. Or, so says the satirical verse doing the rounds on the Internet.
By Kanbawza Win | August 15, 2010 | Sunday
Finally, the Burmese Junta has announced that there will beafake election on Nov. 7th. Short of the numerically attractive 10th of the 10th 2010, 7th was chosen for its numerological significance given that the7+ 11= 18 divisible by9is an auspicious number in local numerology, so much so that former dictator Ne Win decommissioned bank notes not divisible by 9. But 7th also bring back the memory of 7-7-62 better known as the 7th July incident when the former dictator brutally crushed the first student uprising of the Rangoon University. It is still to be seen whether the Junta will ever honour its own election results, for if the another party other than its own party win the election, as in 1990 it may still refused to hand over the power. It seems that by refusing to allow the international observers, the Junta tends to repeat its own trick.
USDP အနိုင်တွက်ထားတဲ့ လူကြိုက်နည်းတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရက်သတ်မှတ်လိုက်ပြီ
တောင်ကြီးတိုင်းမ် | နောင်ခမ်းခါ | သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၀ | သောကျာနေ့
၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်းက ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျင်းပမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို စစ်အစိုးရပိုင် သတင်းဌာနများက ဒီကနေ့ ကြေညာသွားပါတယ်။
တောင်ကြီးတိုင်းမ် | သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိရေးအတွက် USDP ပါတီက တနိုင်ငံလုံးမှာ ပြည်သူလူထုကို အတင်းအကျပ်နည်းတမျိုး ချော့မော့တဲ့နည်းတစ်ဖုံ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လိုက်လံစည်းရုံး နေချိန်မှာ အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ခံနေရတာမကပဲ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်း တွေပြုလုပ်ဖို့ အတားအဆီး အခက်အခဲများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကို ကိုးကားပြီးတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းဌာနများက အစီရင်ခံ ထားပါတယ်။
သံဃာတော်များ ပတ်စ်ပို့လျှောက်ရန် တင်းကျပ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရ
တောင်ကြီးတိုင်းမ် | နောင်ခမ်းခါ
သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် | အင်္ဂါနေ့
ကိစ္စအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံသို့ ခရီးသွားရန် ခရီးသွားခွင့်လက်မှတ် (ပတ်စ်ပို့) လျှောက်သည့် ရဟန်းသံဃာတော်များအပေါ် အာဏာပိုင်များက ထောက်ခံစာအမျိုးမျိုးတောင်းပြီး တင်းကျပ်မှုများ ပြုလုပ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဗွာသရား| သြဂုတ်လ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၀| တနင်္ဂနွေနေ့
၁၉၉၅-၉၆ ခန့်က မြေပြန့်မှာ မြေယာသိမ်းယူခြင်းခံရတဲ့ တောင်သူလယ်သမား တော်တော်များများက ဟိုပုံးလွင်ပြင်အရှေ့ဘက် တောင်တန်းတလျောက်သို့ ရောက်လာကြတယ်။ ပထမတော့ ဒေသခံ သနပ်ဖက်ခြံပိုင်ရှင်များစီက သနပ်ဖက်ခြံမြေများကို ဌားရမ်းပြီးလုပ်ကြတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ အဲဒီသနပ်ဖက်ပင်ကြားမှာ ဘိန်းများကိုပါ စိုက်လာကြတယ်။ အဲလိုမျိုး ဘိန်းစိုက်တာဟာ ဒေသခံရွာသားများ ဝေဖန်လာတော့ ရွာက စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး၊ ကျောင်းဆရာ/မ ထောက်ပံရေး၊ လမ်းများဖောက်လုပ်ရေး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းဇာရပ်ပြုပြင်ရေး အဲဒီအကြောင်းပြချက်နဲ့ အလှူငွေ သောင်းဂဏန်းမှ သိန်းဂဏန်းထိ ထဲ့ကြတယ်။ ရွာသူကြီးလဲ သာရေးနာရေးအတွက် တစ်အိမ်တက် တအိမ်ဆင်း ငွေလိုက်ကောက်တဲ့ အလုပ်ကို သက်သာစေတဲ့အတွက် စိုက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဟူကောင်းဒေသတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျားဘေးမဲ့တောအဖြစ်သတ်မှတ်
တောင်ကြီးတိုင်းမ်| သြဂုတ်လ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၀| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအစွန် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ တစ်ဝက်ခန့် အကျယ် အ၀န်းရှိသည့် ဟူကောင်းချိုင့်ဝှမ်း လွင်ပြင်ဒေသ တစ်ခုလုံးကို ရှားပါးသည့် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သည့် ကျားများအတွက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျက်စားရာ ဘေးမဲ့တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူကို ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ် နိုင်ငံပေါင်း ၇၀ ကျော်က သတ်မှတ်နေဆဲ
တောင်ကြီးတိုင်းမ်| သြဂုတ်လ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၀| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၇၅ နိုင်ငံက လိင်တူချင်းဆက်ဆံသည့်သူများကို ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးအရေးယူမှုများ ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) အဖွဲ့မှ ပြုလုပ်သည့် သုတေသနမှတ်တမ်းအရ သိရသည်။
Nobody knows where the little Shan village of Wan Hsa La is or else the battle was ever fought there. It was in 1948 whenapitch battle was fought between the Burmese army (at that time it was not yet the pocket army of the dictators but under the able leadership of Brigadier Kyaw Zaw) together with the Chinese Communist troops dressed in Burmese army uniforms against the KMTs commanded by General Li Mi.
သြဂုတ်လ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၀
ပအိုဝ်းခေတ်ပေါ် တေးသီချင်းများကို ပထမဆုံး သီဆိုမွေးထုတ်ခဲ့သူ ခွန်သာဒွန်းသည် ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၆ ခု သီတင်းကျွတ်လာဆန်း (၈)ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့နယ် ဖာမွန်းကျေးရွာနေ ဗိုလ်ဟိန်မောင် (ပအမဖ ဥက္ကဋ္ဌ)နှင့် နန်းလွဉ်း တို့၏ ဖွားမြင်သည့် သားသမီး (၇)ဦးအနက် ဒုတိယ အကြီးဆုံးသော သားဖြစ်သည်။
Pa-Oh Article on Election - By Khun Ban Kyar
Constructive Engagement Policy is Making Its Presence Felt
It seems that the ASEAN’s illogical policy of Constructive Engagement towards Burma has make its presence felt. The brain child of Singapore’s Lee KwanYew and Malaysia’s Dr Mahathir Mohammad of letting the Burmese dictators run their course, while ASEAN continue to exploit the country’s natural and human resources have reachedadead end. No doubt the ASEAN’s Foreign Ministers racked their brains in Hanoi of how to handle the most troublesome member of the group as it goes nuclear and is about to threaten the region. In fact alarm bells have been going on in Southeast Asian capitals since early June when it was proven beyond doubt that the Burmese Junta intends to build nuclear weapons facilities.
ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်၊ ၂၀၁၀။ တနင်္လာနေ့
ယခုနှစ်အတွင်း လွန်ခဲ့သည့်ဇွန်လတွင် နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ အတွင်း၌ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု အပူနွေးဆုံး စံချိန်တင်ခဲ့သည့်လဟု အမေရိကန်အစိုးရရာသီဥတုမှတ်တမ်းပြုစုရေးဌာနမှ အစီရင်ခံ တင်ပြထားပါသည်။ ဤစံချိန်အား ကမ္ဘာ့မြေပြင်အပူရှိန်နှင့် သမုဒ္ဒရာရေပြင်အပူရှိန် နှစ်ခုစလုံးကို ပျမ်းမျ၍ တိုင်းသာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဇူလိုင်လ (၁၆)၊ ၂၀၁၀။ သောကျာနေ့
ပင်လောင်း-နေပြည်တော် မီးရထာလမ်း ဖေါက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကြောင့် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ တီကျစ်မြို့ရှိ ကျေးရွာများတွင် နေထိုင်သည့် ဒေသခံပြည်သူလူလုများ ပိုင်ဆိုင်သည့် လယ်ယာ ခြံ မြေများကို ရော်ကြေးတစ်စုံတစ်ခုမရရှိပဲ မီးရထားလမ်းကြောင်းကြောင့် လက်လွတ်ဆုံးရှုံး ခဲ့ကြရသည်။
ကော်မရှင်သို့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ပါတီဝင်စာရင်းတင်ပြပြီ
ဇူလိုင်လ (၁၆) ရက်၊ ၂၀၁၀။ သောကျာနေ့
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (PNO) သည် နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနှင့်အညီ လွန်ခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်၌ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ မိမိတို့ ပါတီဝင်အင်းအားစာရင်း တင်ပြခဲ့ကြောင်း ၁၆ ရက်နေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ၏ နေ့စဉ်ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
ကြံ့ဖွံ့အသင်းဖျက်သိမ်းပြီ၊ ပါတီအဖြစ်နဲ့သာ ကျန်ရှိမည်
ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်၊ ၂၀၁၀။ ကျာသပတေးနေ့
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း (USDA) ဟာ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု (USDP) အဖြစ်နဲ့သာ ဆက်ရှိပြီး နဂိုတည်ရှိ လုပ်ရှားနေတဲ့ USDA အသင်းအဖွဲ့အဖြစ်မှ ဖျတ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ အသင်းရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ သူရမြင့်ဦးမှ ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကို ပြောသွားပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၁၄၊ ၂၀၁၀
စစ်တပ်က သူတို့သိမ်းထားတဲ့ မြေယာများပေါ်မှာ ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးအတွက် ဆိုပြီး တပ်စခန်းတွေ လာဆောက်တယ်။ တချိန်ထဲမှာဘဲ တပ်သားတွေက သူတို့မိသားစုနဲ့အတူ စခန်းမှာ ရောက်လာပြီး အခြေချလာတယ်။ နေ့တဓူဝ သူတို့မိသားစုတွေ ချက်ပြုတ်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ လောင်စာထင်းတွေ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ တပ်စခန်း အနီးအနားရှိ ခြံစည်းရိုးတွေကို ခုတ်ယူဖျက်စီးယုံတင်မကဘူး ခြံထွက်သီးနှံတွေကိုလဲ အစတော့ ခွင့်တောင်းပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ ခြံပိုင်ရှင် ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲ ၀င်ရောက်ပြီး ကိုယ်ကျိုးစီးပွားဖြစ် ခိုးယူလာတယ်။
စပိန်နဲ့ နယ်သာလန် ဘယ်အသင်း ချန်ပီယံပိုင်ရှင်အသစ် ဖြစ်လာမည်နည်း
ဇူလိုင်လ (၈) ရက်၊ ၂၀၁၀။ ကျာသပတေးနေ့
၃၂ သင်းနဲ့ စတင်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲကြီးကို ယခုနောက်ဆုံး စီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ် ကစားပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ၂ သင်းသာ ကျန်ပါတော့ တယ်။ အဲဒီ ၂ သင်းကတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားကြီးရဲ့ တရဖူဆုကို အရယူဖို့ နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ဗိုလ်လုပွဲကို ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမည့် နယ်သာလန်အသင်းနဲ့ စပိန်အသင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ မှစ၍ ဆီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်း လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်များ စတင်ဖမ်းဆီးမည်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးခရိုင်အတွင်းရှိ ဆီဆိုင်မြို့နယ် ဆိုက်ခေါင်၊ ဗန်းယဉ်၊ နောင်မွန် စသည့်မြို့များတွင် လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်များအား ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ယခုလ ဇူလိုင်လမှ စပြီး လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဟု သိရသည်။
7th July-Never Go Bye ( ၇ - ရက်ဇူလိုင် မမေ့နိုင်)
With President Barrack Obama, the first African American at the helm of world affairs, I used to hum an old favourite Negro song
“Gone are the days when my heart is young and gay
Gone are my friends from the University (substituting Cotton fields) away
I hearagentle voice calling Old Ba Win (substituting black Joe)”
ကိုယ်တုံးလုံးထွက်ပြေးမဲ့ မာရာဒိုနာရဲ့အိပ်မက်၊ ဂျာမနီအသင်း ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီ
ဇူလိုင် (၃) ရက်၊ ၂၀၁၀။ စနေနေ့
ယနေ့ စနေနေ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်မှာ ဂျာမနီအသင်းက လွန်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်များ ကစား ခဲ့ရာမှာ သရေပွဲနဲ့ ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ နာမည်ကြီး အာဂျင်တီးနားအသင်းကို ၄ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ယူခဲ့ ပါတယ်။ ဂျာမနီအသင်းဟာ အာဂျင်တီးနားအသင်းကို မထင်မှတ်ပဲ ဤကဲ့သို့ ဂိုးအပြတ်အသတ်နဲ့ ရက်စက်စွာ အနိုင်ယူလိုက်တဲ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ဖလား ပရိတ်သတ်များနဲ့ သုံးသပ်သူများကို မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် လွန်စွာအံ့သြ စေခဲ့ပြီးတော့ စီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ တက်လာမည့် စပိန် (သို့) ပါရာကွေး အသင်းနဲ့ ယှဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကာနာအသင်းကို ပဲန်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့နိုင်ပြီး ဥရုကွေးစီမီးဖိုင်နယ်တက်ပြီ
ဇူလိုင် (၂) ရက်၊ ၂၀၁၀။ သောကျာနေ့
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲအားလုံးများအနက် ဒီနေ့ဥရုကွေးအသင်းနဲ့ ကာနာအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲလောက် မယုံနိုင်လောက်အောင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပွဲ မရှိခဲ့ သေးပေ။ ကာနာအသင်းကတော့ ပြိုင်ပွဲကြီးကို မေ့လို့မရနိုင်အောင် နမျောတမ်းတလို့မဆုံးအောင် ရင်ထုမနာ ကျေကွဲစရာ အကောင်းဆုံး အခြေအနေနဲ့ ထွက်ခွါခဲ့ရပါတယ်။ ဒီပွဲကိုတော့ အာဖရိကတိုက်သားများအတွက် လွယ်လွယ်နဲ့မေ့လို့ ရနိုင်မယ် မဟုတ်ပေ။
အစကောင်းလဲ အနှောင်းမသေချာတဲ့ ဘရာဇီးအသင်း သရဖူနဲ့ဝေးရပြီ
ဇူလိုင်လ (၂) ရက်၊ ၂၀၁၀။ သောကျာနေ့
နယ်သာလန်အသင်းက ၅ ကြိမ်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံပိုင်ရှင် နာမည်ကြီး ဘရာဇီးအသင်းကို ပြိုင်ပွဲဒုတိယပိုင်းအချိန် သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူခဲ့ပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်ကို ကျော်လွား၍ လာမည့် စီမီးဖိုင်နယ်ပွဲ အဆင့်မှာ တက်ရောက်လာမည့် ကာနာသင်း သို့မဟုတ် ဥရုကွေးအသင်းနဲ့ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါရာကွေးချန်ပီယံဖြစ်ရင် ကိုယ်တုံးလုံး ထွက်ပြေးမည်ဟု ဖက်ရှင်မော်ဒဲယ်မလေး ကြိမ်းဝါးထား
ဇူလိုင် (၁) ရက်၊ ၂၀၁၀။ ကျာသပတေးနေ့
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ပါရာကွေးအသင်း ချန်ပီယံဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ရင် လမ်းမပေါ်တွင် အ၀တ်မပါပဲ ကိုယ်တုံးလုံးဖြင့် ထွက်ပြေးမည်ဟု အသက် ၂၄ နှစ်ရှိ ပါရာကွေး အတွင်းခံဖက်ရှင်မ Larissa Riquelm က ဂတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ဇွန်လ (၃၀) ရက်၊ ၂၀၁၀။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပအိုဝ်းလူမျိုးများနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည့် တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်နှင့် အခြားသောမြို့နယ်များအတွင်းတွင် ပအိုဝ်း အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO မှ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စည်းရုံးရေးကွင်းဆင်းပြီး ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခု ဇွန်လ (၁၂) ရက်မှ (၁၃) ရက်အထိ ဆီဆိုင်မြို့အနီး ပုံလောင်းရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် PNO မှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် စစ်အစိုးရဒေသခံအာဏာပိုင်များ ပူးတွဲ၍ ဒေသခံပြည်သူလူထုများကို အစည်း အဝေး ခေါ်ယူ၍ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဆိုင်သည့် အကျောင်းအရာများ ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဇွန်လ (၂၉) ရက်၊ ၂၀၁၀။ အင်္ဂါနေ့
ယနေ့ ၁၆ သင်းရှုံးထွက်ပွဲစဉ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲကို စပိန်အသင်းက ပေါ်တူဂီအသင်းကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရှိ ခြေအသာနဲ့ ခြေစွမ်းပြ အနိုင်ယူပြီး၊ ကွာတားဖိုင်နယ်သို့ ဆက်ကစားရန် အခြားအသင်း (ရ) သင်းနဲ့တူ တက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
စပိန်ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ကစားကွက်နဲ့ ပြိုင်ပွဲတချိန်လုံးလိုလိုမှာ ဖိအားပေး ကစားခဲ့ပြီးတော့ ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့ ခံစစ်စနစ်ကြာရှည်မခံနိုင်ခဲ့ပေ။
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုံး ပဲန်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့ ပေးရတဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကစားချိန် မိနစ်ပေါင်း ၁၂၀ ယှဉ်ပြိုင်ရာမှ အချင်းချင်းဂိုးမသွင်းနိုင်ကြပဲ ပဲန်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့ နောက်တန်းကစားသမား ကျောနံပါတ် ၃ ကာမနိုရဲ့ ပဲန်နယ်တီကန်ချက်လွဲချော်ခဲ့မှုဖြင့် ဂျပန်အသင်းမှ ဥရုကွေးအသင်းကို ၅ ဂိုး ၃ ဂိုးနဲ့ ရှုံးနှိမ့်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲမှ ခွဲခွါလိုက်ရပါတယ်။
ချီလီအသင်းထွက်ပြီး တောင်အမေရိကမှ ၃ သင်း ကွာတားဖိုင်နယ်ရောက်ပြီ
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားဘော်လုံးပြိုင်ပွဲကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ တိုက်အလိုက် နိုင်ငံတွေကတော့ ဥရောပတိုက်က ၁၃ နိုင်ငံ၊ အာဖရိကတိုက်က ၆ နိုင်ငံ၊ တောင်အမေရိကတိုက်က ၅ နိုင်ငံ၊ မြောက်အမေရိကတိုက်က ၃ နိုင်ငံ၊ အာရှတိုက်က ၃ နိုင်ငံ၊ သြစရေးလျနဲ့ နယူးဇီလန် စသည့် နိုင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ (၂၇)၊ ၂၀၁၀။ တနင်္ဂနွေနေ့
ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့အထိ အကြီးဆုံးကမ္ဘာ့အားကစားပြိုင်ပွဲ မစတင်ခင်တုန်းက ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ချန်ပီယံဆုပဲ ဆွတ်ခူးနိုင်တော့မလိုလိုနဲ့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဘော်လုံးအကျော်အမော် အင်္ဂလန်အသင်း ကတော့ နာမည်ကြီး ထမင်းငတ်ဆိုသလို ဂျာမနီအသင်းကို ၄ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ မရှုမလှ အပြတ်အသတ်ရှုံးနှိမ့်ခဲ့ ပါတယ်။
USA နဲ့ ကာနာ၊ ကိုးရီးယားနဲ့ ဥရုကွေး တို့ပွဲ ဘယ်အသင်းကျန်ခဲ့မှာလဲ
ဇွန်လ (၂၆) ရက်၊ ၂၀၁၀။ စနေနေ့
လွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန်လ (၁၁) ရက်၊ သောကျာနေ့က တကမ္ဘာ့လုံးမှ အသင်းပေါင်း ၃၂ သင်းနဲ့ စတင်ကစားခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလာဘော်လုံးပြိုင်ကြီးဟာ ဇွန်လ (၂၅) ရက်နေ့၊ သောကျာနေ့ အုပ်စုပွဲစဉ်အားလုံး ယှဉ်ပြိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အသင်းပေါင်း ၁၆ ကတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ တ၀ှက်ကတော့ စနေနေ့မှာ ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်ကို ဆက်ပြီးတော့ ကစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂိုးမဲ့နဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးနဲ့ ပေါ်တူဂီနှစ်သင်းလုံးဆက်သွား၊ မြောက်ကိုးရီးယားကို ၃-၀ နဲ့ အနိုင်သွင်းခဲ့တဲ့ အိုင်ဗရီကိုစ် ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံနဲ့အတူ အိမ်ပြန်
ဇွန်လ (၂၅) ရက်၊ ၂၀၁၀။ သောကျာနေ့
နာမည်ကြီးအသင်းနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ ဘရာဇီးနဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်း အပြန်အလန် အကြီးအကျယ် တိုက်စစ်ဆင် ထိုးဖေါက်ခဲ့ကြသော်လည်း ပွဲပြီးတဲ့အထိ တဂိုးမှ မသွင်းနိုင်ခဲ့ပဲ ၁ မှတ်စီဖြင့်သာ ခွဲဝေယူကြပြီး နှစ်သင်းစလုံး ၁၆ သင်း ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်အဆင့်သို့ အတူဆက်သွား ကြပါတယ်။
ဇွန်လ (၂၄) ရက်၊ ၂၀၁၀။ ကျာသပတေးနေ့
နှစ်သင်းစလုံးခြေမသိမ်းမယိမ်းနဲ့ သူဘက် ကိုယ်ဘက်အပြန်အလှန် တိုက်စစ်ဆင် ဖိကစားခဲ့ ကြပါတယ်။ ပထမပိုင်းစတင်ပြီး သိပ်မကြာ ၁၇ မိနစ်လောက်မှာပဲ ဟွန်ဒါတိုက်ရိုက်သွင်းတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဘောနဲ့ ဂျပန်အသင်းက ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းပြီး၊ မိနစ် ၃၀ လောက်မှာ ပြစ်ဒဏ်ဘောနဲ့ပဲ ဂျပန်အသင်း ကျောနံပါတ် (၇) ယာစူဟိတိုအဲန်ဒို မှ ဒုတိယဂိုး ဆက်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ နှစ်ဂိုးစလုံး ပြစ်ဒဏ်ဘောနဲ့ ဂျပန်အသင်းက ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒိန်းမတ်အသင်းမှ ပထမပိုင်း ဂိုးသွင်းခွင့်ရခဲ့သော်လည်း ၀င်အောင်မသွင်းနိုင်ခဲ့ပေ။
ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲရလဒ်များ။ ပြင်သစ် မရှုမလှအိမ်ပြန်ခဲ့ရ။ ၁၆ သင်း ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်မှာ အင်္ဂလန်အသင်း အလားအလာမကောင်း
ဇွန်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၀။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ အုပ်စု (C) ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ပွဲတွေကတော့ ဗြိတိန် နိုင်ငံသားများနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပွဲလို့ ပြောရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ နှစ်သင်း စလုံးမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ပွဲစလုံးက နိုင်ပွဲမဲ့ သရေပွဲနဲ့ ရမှတ် ၂ မှတ်သာ ရခဲ့ကြတဲ့အတွက် ဒီနေ့ပွဲမှာ ရှုံးရင် ထွက်ရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
ဇွန်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၀။ တနင်္လာနေ့
PNO နှင့် န၀တ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူမှု ပြုလုပ်ပြီးနောက် ပအိုဝ်းဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဒေသခံရွာသားများ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြေယာအမြောက်အများကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အာဏာပိုင်များက အဓမ္မသိမ်းယူလာခဲ့ကြတယ်။ ဟိုပုံးမြို့မှာဆိုရင် မွေတော်ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ တောင်ဘက်မှ စပြီး နောင်ပါ့ဖာ အနောက်ဘက်အထိ ရှိတဲ့ သနပ်ဖက်ခြံတွေကို မြို့နယ်အာဏာပိုင်နှင့် စစ်တပ်တို့ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းကြပြီး ၀န်ထမ်းရပ်ကွက်(၁) နဲ့ ၀န်ထမ်းရပ်ကွက် (၂) အမည်နဲ့ မြေကွက်ဖော်ပြီး ပြန်ရောင်းချခဲ့တယ်။
ဟိုပုံးမြို့နယ်တွင် ပအိုဝ်းရိုးရာ မီးဒုံးလွတ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပ
ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်။ တနင်္ဂနွေနေ့
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဟိုပုံမြို့နယ်ရှိ နောင်တောင်ကျေးရွာတွင် နောင်တောင်ဆရာတော်မှဦးစီး၍ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၀ မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ပအိုဝ်းရိုးရာမိုးခေါ်ပွဲ ခေါ် ပအိုဝ်းရိုးရာ မီးဒုံးလွတ်ပွဲတော် စည်ကားစွာ ကျင်းပသည်။
ပအိုဝ်းရိုးရာမီးဒုံးလွတ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပအိုဝ်းရိုးရာမီးဒုံးလွတ်ပွဲ အစဉ်အလာမပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်လျှောက်သွားရန်၊ ကျောင်းရန်ပုံငွေ ရရှိရန်နှင့် နောင်တောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းပရဟိတပညာရေးရန်ပုံငွေ ရရှိရန် စသည့်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။
စပိန်အသင်း ပေါ်တူဂီကို ဖြုတ်ချပြီး ကွာတားသို့ တက်ပြ...